အယ်ဒီတာချုပ် ဦးကျော်မင်းဆွေနဲ့ သရော်စာဆောင်းပါးရှင် ဗြိတိသျှကိုိုကိုမောင်ကို ဖမ်းမိန့်ထွက်ပြီဟုသိရ ~ Myaylatt Daily.
Than Htike မှကူးယူဖော်ပြသည်။
ဗွိုက်စ်သတင်းစာအယ်ဒီတာချုပ် ဦးကျော်မင်းဆွေနဲ့ သရော်စာဆောင်းပါးရှင် ကိုကျော်ကျော်နိုင် (ခေါ်) ဗြိတိသျှကိုကိုမောင်တို့ကို တပ်မတော်က ဆက်သွယ်ရေးပုဒ်မ ၆၆ (ဃ) နဲ့ တိုင်ကြားထားမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဒီနေ့ညနေမှာ သူတို့နှစ်ဦးကို ရန်ကုန်မြို.ဗဟန်းရဲစခန်းကို ရဲတပ်ဖွဲ.ကဆင့်ခေါ်မေးမြန်းခဲ့ပါတယ်။ သူတို့နှစ်ဦးကို ဖမ်းဆီးဖို့ အမိန့်ထွက်ထားပြီဖြစ်ကြောင်း စခန်းကိုလိုက်ပါသွားတဲ့ သူတို့ရဲ. ဥပဒေအကြံပေး ဦးခင်မောင်မြင့်က Myanmar Now သတင်းဌာန ကို ယနေ့ ညနေ ၅ နာရီမှာ တယ်လီဖုန်းနဲ့ ပြောဆိုပါတယ်။
“အထက်အမိန့်အရ ရဲစခန်းက အဖမ်းပြတော့မယ်လို့သိရပါတယ်။ သူတို့နှစ်ယောက်ခုထိ စခန်းထဲမှာပဲ။ ကျနော်ကတော့ လုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာ အလွှဲအပြောင်းတွေကြောင့် တနင်္ဂနွေထိစောင့်ပေးပါလို့မေတ္တာရပ်ခံနေပါတယ်” ဟု ဦးခင်မောင်မြင့်က ဆိုသည်။
ခရက်ဒစ် - BaKaung